Ny fitaovana manokana na ny faritra fampiharana dia mitaky fanodinana manokana.
Ny flux ampiasaina mandritra ny fizotran'ny brazing induction mahazatra dia matetika no mahatonga ny fahasimbana sy ny fandoroana amin'ny workpiece. Ny fampidirana flux dia mety hitarika fahasimban'ny fananana. Ankoatr'izay, noho ny oksizenina efa misy ao amin'ny atmosfera dia misy ny fiovan'ny toetr'andro.
Ireo olana ireo dia azo sorohina rehefa miompy ao anaty lasantsy na banga. Ny fomba entona tsy miteraka dia azo ampifangaroina tsara amin'ny fanamainana inductive satria tsy misy lelafo misokatra mandritra ny brazing induction eo ambanin'ny entona miaro ary ny fepetra mifandraika amin'ny fikorianana dia azo fehezina tsara kokoa.
Sokajy Technologies Tags brazing, famoahana entona tsy azo ovaina matetika, fampidirana bizina entona tsy mihinana, fanamafisam-peo entona heater, fanamafisana entona tsy mandeha ho azy, mitsonika entona mitsonika, fampidirana solika tsy mandeha ho azy, gazy tsy mihinana, famonoana gazy inert, dingana famonoana gazy tsy mihinana, fanamaintanana entona, heater induction entona, fanamafisana induction entona, soldering entona tsy mihinana Post Fikarohana